Somaliland: Dal 10 Tallaabo hore u qaadaya 40 Maalmood gudahood - WARBIXIN - Somaliland Post
Home Maqaallo Somaliland: Dal 10 Tallaabo hore u qaadaya 40 Maalmood gudahood – WARBIXIN
Somaliland: Dal 10 Tallaabo hore u qaadaya 40 Maalmood gudahood – WARBIXIN
Wax ka ogow Arrimo badan oo ku saabsan Doorashada Somaliland looga dareerayo Isniinta Beri’ Warbixin – by Saleebaan Kalshaale
Somaliland, waxa maalinta Isniinta ee 13 November looga dareerayaa codbixinta Doorasho madaxweyne oo wax badan kaga duwan kuwii hore dalkan uga dhacay, laga soo bilaabo markii ay madaxbanaanideeda kala soo noqotay Soomaaliya 1991-kii.
Doorashadan oo qabsoomideedu muddo dheer soo jiitamaysay, muddo sanad iyo badh ku dhawna dib uga dhacday wakhtigeedii, waxa kaadhka codbixinta qaatay oo si xor ah codkooda u dhiiban doona dad tiradoodu dhantahay 704,089, kuwaasi oo ka codayn doona 1642 goobood oo ku yaalla 21 degmo doorasho, waxaana ku tartamaya saddex Murrashax Madaxweyne iyo ku-xigeennadooda oo u kala sharaxan Xisbiyada ,Kulmiye, UCID iyo WADDANI.
Dhamaan goobaha codbixinta Doorashada, ayaa albaabbada loo furi doona Isniinta Beri saacadu markay tahay 7:00 Arroornimo, waxaanay furnaan doonaan ilaa 6:00 Galabnimo, sida ay ku dhawaaqeen Guddida Doorashadu gelinkii hore ee Axadda Maanta.
Kaddib, 21 maalmood oo lagu gudo jiray Olollaha Doorashadaas, saddexda Murrashax Madaxweyne ee Xisbiyada, ayaa Sabtidii Warbaahinta ka soo muuqday, iyagoo Gacmaha is haysta, taasoo ay ku muujiyeen jawi ka duwan kii laga arkayey intii Ololluhu socday oo ay Fagaareyaasha isaga jeedinayeen dhaliilo iyo eeddeymo siyaasaddeed oo aanay waxba iskula hadhin.
“Maanta waxaan muujinaynaa Somaliland oo gacmaha is haysata. Wuu dhamaaday loollankii fagaareyaasha.” Sidaas waxa yidhi Cabdiqaadir Iimaan Warsame Guddoomiyaha Guddida Doorashooyinka Somaliland oo hadlayey isagoo ay hareeraha ka taagan yihiin saddexda Murrashax
“haddii Doorashadani ku dhamaato sidaa Ololluhu ku dhimaaday 10 talaabo ayey hore u qaaday Somaliland”. Waxa uu intaa ku daray “Doorashadan Olollaheeda waxa ku badnaa Qabyaalada, laakiinse si nabad-gelyo ah ayuu ku dhamaaday” ayuu yidhi Cadami
Falanqeeye Cadami, ayaa sheegay in Murrashaxiinta tartamaysaa balanqaadyo badan sameeyeen “laakiinse way adag tahay in madaxweynaha soo socdaa fuliyo wixii uu balanqaaday, markaa waxaan leeyahay waa muhiim inuu fuliyo wixii uu balan qaad sameeyey. Waayo dadku way ka aamin baxeen balanqaadyada siyaasiga” ayuu yidhi.
Xilligan ay doorashaddu ku soo beegantay
Waxa intaa dheer marka hoos loogu sii daadego Guddida Doorashada ee sare iyo dhamaan howl-wadeenadoodu waa la dhaariyey. Waxa kale oo jira Wakiillo ka socda saddexda Xisbi oo ku sugan goob kasta oo Doorashada lagu qabanayo.
Muuqaalka, Faysal iyo Cabdiraxmaan Cirro, waxay leeyihiin Bidaar, midabkooduna waa casaan.
Si kastaba ha ahaatee saddexdan Murrashax iyo ku-xigeenadooda labadii Doorashada ku soo baxaa, ma ay guulaysan iyagoo qudhi, balse guushoodu waxa la wadaagaya dhamaan reer Somaliland oo dhan. Waxa xaqiiqo ah inaanay Doorashadani ahayn mid lagu dooranayo madaxweyne iyo Madaxweyne ku-xigeen qudha, hase yeeshee ay Shacbiga uga dhigan tahay talaabo ay Caalamka kula garnaqsanayaan.
Doorashadan waxa ka qayb-gelaya oo dalka ku sugan in ka badan 60 goob-jooge oo ka socda Caalamka, kuwaasoo ka socda Ururka goob-joogeyaasha Doorashooyinka Caalamka. In ka badan oo kale oo ay kamid yihiin Muwaadiniin wadamo fog uga yimi inay door ka qaataan Doorashada dalkooda ka qabsoomaysa ayaa ku sugan magaalooyinka Somaliland.
Indhaha Caalamkuna waa markhaatiyeyaal meel fog ka soo bidhaaminaya sida wax uga socdaan Somaliland. Dalalka Jaarka la ah Somaliland faro-gelin kuma laha Doorashadan iyo kuwii hore toona, balse iyagu waxay mar walba quud-daraynayaan inay nabad-gelyo ku dhamaato.